China Silicone Cable Winders fekitori uye vagadziri | SJJ
Iwe une dambudziko here netambo dzako dzemafoni, tambo dzemagetsi, uye mimwe mitsara accessories? Isu tinokurudzira kushandisa zvirinyore zvinhu izvo silicone tambo mamhepo kuti dziite dzakanaka uye dzakarongeka. Iyo silicone tambo yekumhepo ndeye eco-inoshamwaridzika uye isiri-chepfu, iwo akapfava uye akatsetseka kuti agadzirwe mu diff ...
Iwe une dambudziko here netambo dzako dzemafoni, tambo dzemagetsi, uye mimwe mitsara accessories? Isu tinokurudzira kushandisa zvirinyore zvinhu izvo silicone tambo mamhepo kuti dziite dzakanaka uye dzakarongeka. Iyo silicone tambo yekumhepo ine eco-inoshamwaridzika uye haina-chepfu, iwo akapfava uye akatsetseka kuti agadzikiswe mumhando dzakasiyana, ayo anobata tambo zvakakwana.
Akanaka Shiny Zvipo akaburitsa mamwe akagadzirwa maumbirwo, iwo maumbirwo akasununguka kune aya aripo magadzirirwo. Yedu nyanzvi yehunyanzvi timu inokwanisa kugadzira zvimiro uye zvigadzirwa maererano nezvamunoda, uye ichapa mamwe mazano mune zvakadzama. Kune rimwe divi, marogo ayo akadhindwa kana mavara akazadzwa pane silicone tambo mamhepo anokwanisa kugadzirwa kushambadza chero mapurojekiti zvinoenderana nezvikumbiro zvevatengi. Iyo silicone tambo yemhepo haingori chete maturusi ekurongedza nzvimbo yako yekushandira, asi zvakare yakanakisa migero yekuratidza mazano ako kana pfungwa.
Zvishandiso: Silicone nevamwe
Dhizaini uye saizi: Yemahara muforoma muripo kune edu aripo magadzirirwo, akagadzirwa magadzirirwo
Logos: Logos inogona kuve yakadhinda, embossed kana kuraswa nemavara akazadzwa
MOQ: 200 bv
Pashure: Silicone Kadhi Vabati
Zvadaro: Silicone Tambo
Kisimusi Chiso Masiki
Mufashoni Chengetedzo LED Inoratidzira Keychain